Maka: izinhlelo zokusebenza zewebhu | Martech Zone
Maka: izinhlelo zokusebenza zewebhu
ULwesihlanu, July 30, 2021 ULwesihlanu, July 30, 2021 UJui Bhatia
Imboni yokuthengisa imboni enkulu eyenza imisebenzi eminingi kanye nemisebenzi. Kulokhu okuthunyelwe, sizoxoxa ngamathrendi aphezulu kusoftware yokuthengisa. Ngaphandle kokulinda okuningi, masiqhubekele phambili kumathrendi. Izinketho zokukhokha - izikhwama zedijithali nezindlela ezahlukahlukene zokukhokha zengeza ukuguquguquka kwezinkokhelo ezenziwa online. Abathengisi bathola indlela elula nokho evikelekile yokuhlangabezana nezidingo zokukhokha zamakhasimende. Ngezindlela zendabuko, imali kuphela evunyelwe njengenkokhelo
Izingxenyekazi zekhompuyutha, isoftware… i-Webware?
NgoLwesithathu, Januwari 16, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ekuguqukeni komkhakha wamakhompiyutha, sine-Hardware - imishini edingekayo ukwenza izinhlelo. Futhi sasineSoftware, izixazululo ezazisebenzisa lezo zinsizakusebenza ukwenza umsebenzi esingawuthenga futhi siwufake kwimidiya ehlukile. Kulezi zinsuku, ungalanda isoftware ngaphandle kwemidiya. Iminyaka engamashumi amabili ye-Hardware ne-Software Hardware inokuthuthuka nokufaka okunye esikhundleni sayo. Ngilahlekelwe ngokwethembeka wonke amakhompyutha engibe nawo kuze kube manje. Mina